Test Manager ပျောက်သွားလို့ — MYSTERY ZILLION
Test Manager ပျောက်သွားလို့
Test Manager ပျောက်သွားလို့။ ကွန်ပျူတာသုံးသူတိုင်း တွေ့ဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ခဏခဏတွေ့ဖူးပါတယ်။ ctrl+alt+del နှိပ်လိုက်တာနဲ့ window က restart ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့ဒါ သိသူများ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါ။:77:
အဲဒါ virus ကြောင့်ပါ... ဘာနာမည်လဲတော့ မှတ်မိတော့ဘူး.. Safe Mode နဲ့ တက်ပြီး autorun ူlist ကို ဒီမှာပြန်ပြပေးနိုင်ရင်တော့ သေချာပြောနိုင်ပါမယ်ဗျာ.... ခုတော့ ဘာမှန်းသေချာသိဘူး...
ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ အဲဒီ virus ကို kaspersky ဆိုတဲ့ Anti-Virus software လေးက သတ်နိုင်တယ်ဗျ။ Update တော့လုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့။ Virus ကိုတော့သတ်နိုင်ပေမဲ့ TaskManager ကိုတော့ခေါ်လို့ ရအုံးမှာ မဟုတ်သေးဘူး။
Run ထဲကနေ regedit လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Registry ထဲ ရောက်သွားရင်တော့
မှာ DisableTaskMgr ဆိုတဲ့ စာကို ရှာပြီး Value data ဆိုတဲ့နေရာမှာ 1 ကနေ0ကိုပြောင်းပေးပြီး Logoff
လုပ်ပေးလိုက်ရင် TaskManager ကို ခေါ်လို့ ရပါပြီဗျာ။
kosai wrote: »
I can not find Disable TaskMgr
And, there is no Folder named " System " in directory HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies
However, the folder named " System " found in the directory of HKEY_LOCAL_MACHINE\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies ............... Unfortunately, there is no word of " Disable TaskMgr ".
I can't also find in Edit toolbar>find. It's may be lack of my technical knowledge.
Could you explain more bro.
UNICEF ( Maw Gyun )
1) windows + r ကနေ gpedit.msc ကိုခေါ်ပေးပါ
2) user configuration ထဲက administrative templates/system/ctrl+alt+del options/remove task manger ကို double click လုပ်ပေးပါ နောက် disable လုပ်ပေးပါ၊
3) ခဏကြာရင် task manger(ctrl+alt+del) ခေါ်လို့ရပါပြီ၊ မရင်သေးရင် not configured ပြန်လုပ်ပေးပါ၊
* ဒါမလုပ်ခင် virus အရင်သတ်လိုက်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါဒယ်၊
* တချို့ gpedit.msc ခေါ်လို့မရတာက administrator account မဟုတ်လို့ပါ(ဘယ်လို၀င်ရမလဲ ဆိုတာ နောက်တော့မှ ပြောပြမယ်နော် နည်း၂ရှည်မှာစိုးလို့)
* safte mode(F8) နဲ့ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါဒယ်
Soe Tun Naing wrote: »
ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိပ်အကျွမ်းကျင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး..ဒါပေမယ့် အခုလို Test Manager ပျောက်သွားတာကို ကျွန်တော်လည်း ကြုံဖူးခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက ထွင်ထားတဲ့ Software လေးနဲ့ အဆင်ပြေသွားတယ်..folder option ပျောက်တာလည်း ပြင်လို့ရတယ်..Hidden file တွေကိုလည်း ပြန်ဖော်ခိုင်းလို့ရတယ်လေ... Website address ကမေ့သွားတယ်..ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စက်ထဲမှာ software လေးသိမ်းထားလို့ upload တင်ပြီး ပြန် share လိုက်ပါတယ်... အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာမိမှာပါခင်ဗျာ..။
ဒီမှာ download လုပ်ကြည့်ပါလားခင်ဗျာ..4shared.com မှာတင်ထားတာပါ..။
ကို Alexander ရေ အခု ကျွန်တော်ပြောတာ အမှန်ပါ ကျန်ရှိတာကို ကျော်သွားလို့ နားမလည်ရင် ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ် (၁) HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_Curre ntVersion\_Policies\_System က path ကိုအရင် မှတ်သားထားပါ။ (၂) HKCU\_Soft..................\_Policies\_ ထိရောက်သွားရင် Policies ကို Right-Click နှိပ်ပြီး popup-menu ထဲက New\_Key ကိုရွေးပြီး System လို့ နာမည်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆို HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_Curre ntVersion\_Policies\_System ထိပြီးသွားပါပြီ။ (၃) HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_Curre ntVersion\_Policies\_System မှာ Right-Click နှိပ်ပြီး New\_DWORD value ကိုရွေးပြီး DisableTaskMgr (အသေးအကြီး မလွှဲ) လို့ ရေးလိုက်ပါ။ DisableTaskMgr နေရာကို Right-Click Modify or Double-Click နှိပ်ပြီး Value data မှာ 1 လို့ ပြောင်းရေးလိုက်ပြီး Logoff Logon or restart နှိပ်ပြီး ပြန်၀င်လိုက်ရင် TaskManager Disable ဖြစ်သွားပါပြီ။ (၄) TaskManager ကို Enable ပြန်လုပ်ချင်ရင် အဆင့် (၃) က Value data မှာ0လို့ ပြန်ရေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ ကို Alexander ရေ အထက် က အချက်အတိုင်း လုပ်ကြည့်လိုက်ပါလား။ အဆင်မပြေရင်ပြန်ပြောလိုက်ပါအုံး။ Bye See you later......
ဒီဟာလေးနဲက လဲစမ်းကြည့်ပါဦး အကို
download from this site.